September 15, 2021 N88LeaveaComment on मानिसले चुम्बन गर्न सुरु गर्नुका कारण यस्ताे रहेछ !
एजेन्सी । संसारभरीका १६८ संस्कृतिको अनुसन्धान गर्दा आधाभन्दा कम समुदायमा मात्रै अधरमा चुम्बन गर्ने प्रचलन रहेको भेटियो । युनिभर्सिटी अफ नेभदा लास भेगसका मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक विलियम जानकोवियाकले ४६ प्रतिशत वैशालु जोडीले रोमान्टिक अवस्थामा चुम्बन गर्ने गरेको बताए । यसमा आमाबुवाले बच्चा गर्ने र अभिवादनका लागि गरिने चुम्बन समावेश गरिएको छैन । यहाँ यस्ता दुई […]
September 15, 2021 N88LeaveaComment on जहाँ बेहुलाको साथीहरुले उतार्छन् बेहुलीको कपडा
एजेन्सी । संसारमा अलग–अलग खाले रीतिरिवाज र परम्परा हुन्छन् । चीनको एउटा परम्पराले पनि तपाईलाई चकित पार्नसक्छ । यहाँ विवाहपछि बेहुलाका साथीहरुले बेहुलीलाई आफ्नो काँधमा राखेर उठाउँछन् । त्यसपछि बेहुलीको कपडा उतार्छन् । तर, दुलहाले यसको विरोध गर्दैनन् । बरु, दुलहीका साथीहरुले ती केटाहरूलाई रोक्ने कोसिस गर्छन् । यदी दुलहाका साथीहरु दुलहीको कपडा उतार्न सफल […]
विवाहकाे निम्ताेमा नआउनेलाई पठाइयो खानाको बिल
September 15, 2021 September 15, 2021 N88LeaveaComment on विवाहकाे निम्ताेमा नआउनेलाई पठाइयो खानाको बिल
एजेन्सी । सिकागोका एक नवविवाहित जोडी सोसल मिडियामा एकाएक चर्चामा आएका छन् । उनीहरु चर्चामा आउनुको कारण भने निकै रोचक छ । यी जोडीले आफ्नो विवाहमा सरिक नभएका आमन्त्रितलाई खानाको बिल पठाएका छन् । खानाको बिलको फोटो उनीहरुले सोसल मिडियामा पोस्ट गरेका थिए । ४४ वर्षका डो सिमोन्स, ४३ वर्षकी डेड्रा म्याकगीले जमाइकाको रोयल्टन नेग्रिल […]
सन्दीप लामिछानेले मारे अर्को छलाङ: आईसीसीले दियो सरप्राइज
September 15, 2021 N88LeaveaComment on सन्दीप लामिछानेले मारे अर्को छलाङ: आईसीसीले दियो सरप्राइज
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अर्को छलाङ मारेका छन् । उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले सरप्राइज दिएको छ सन्दीप पहिलो पल्ट नेपालको इतिहासमै ओडिआई वरियता शीर्ष एक सयमा परेका छन् । सन्दीप नेपालबाट शीर्ष एक सय ओडिआई वरियतामा पर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ ओडिआई वरियताको बलिङतर्फ […]
एमाले नेता शंकर पोखरेलवि’रुद्ध अपह’रण सम्बन्धी मु’द्दा, कसुर प्रमाणित भए १० वर्ष जे’ल !
September 15, 2021 N88LeaveaComment on एमाले नेता शंकर पोखरेलवि’रुद्ध अपह’रण सम्बन्धी मु’द्दा, कसुर प्रमाणित भए १० वर्ष जे’ल !
काठमाडौं । पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमालेका नेता शंकर पोखरेलवि”रुद्ध अ”पह रण तथा शरीर बन्ध”क सम्बन्धी किटानी जाहेरी परेको छ । पोखरेलसहित ४ जनावि”रुद्ध सांसद विमला कुमारी खत्रीले किटानी जाहेरी दिएकी छन्। पोखरेल मुख्यमन्त्री रहँदा सांसद वलीलाई दाङबाट गाडीमा ल्याएर मुख्यमन्त्री निवासमा ब”न्धक बनाएको भन्दै उनले किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । वलीले दिएको जाहेरीमा साउन १५ गतेदेखि […]
प्रभु शाहका लागि एमाले र माओवादी दुबैको ‘ढोका बन्द’
September 15, 2021 N88LeaveaComment on प्रभु शाहका लागि एमाले र माओवादी दुबैको ‘ढोका बन्द’
काठमाडौं । पहिले माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मानिने प्रभु शाह नेकपा एमालेमा लागेपछि सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमाए । माओवादी छाडेर एमालेमा गएपछि मन्त्री खाना गएको आरोप पनि खेपे । केहि अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले विवादमा पनि तानिए । एमालेमा गएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रियपात्र बनेका शाहले एमाले छोड्ने भएका छन् । एमालेको केन्द्रीय […]
प्रधानमन्त्रीको तलबभत्ता रोकिने, सभामुखको नरोकिने, एमालेले देउवा सरकारलाई पार्नु-पार्यो पीर
September 15, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्रीको तलबभत्ता रोकिने, सभामुखको नरोकिने, एमालेले देउवा सरकारलाई पार्नु-पार्यो पीर
काठमाडौं । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि सरकारले आज मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्कृय भएको र नयाँ सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउन नसकेपछि ढुकुटीबाट खर्च रोकिंदा केही सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेछन् । सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न रोकिने यो […]
September 15, 2021 N88LeaveaComment on आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आउँदो निर्वाचनबाट माओवादीलाई पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बिहान आयोजित दिवंगत माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटी ‘दिवाकर’को ७औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कसैले नपत्याए पनि माओवादी पहिलो पार्टी हुने जिकिर गरेका हुन् । ‘हामीले जनयुद्ध […]
एमालेका कारण इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे, ओलीसँग निहुँ खाेज्नु पर्याे सरकारलाई भारी
September 15, 2021 September 15, 2021 N88LeaveaComment on एमालेका कारण इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे, ओलीसँग निहुँ खाेज्नु पर्याे सरकारलाई भारी
काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भए पनि संशोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ । जसका कारण बुधबारदेखि चालू आवका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण […]
September 15, 2021 N88LeaveaComment on कोरोनाले चार महिना धकेलिएको कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण चार महिना पर धकेलिएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आज बुधबारबाट सञ्चालन हुँदैछ । पहिलो दिन आज अनिवार्य अंग्रेजीको परीक्षा हुँदैछ । परीक्षा बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । ८ असोजसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा ३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी छन् । परीक्षामा विद्यार्थीलाई होम सेन्टर कायम गरिएको […]